Top 25 Online News Radio Stations si ogaal
Top 25 Online News Radio Stations in Dhegayso News Online
Xataa xilligii caadi ah technology sii kordhaya, dadka qaar ka mid ah adduunka ayaa weli la isticmaalaa, Si uu jidadka isgaarsiinta jeclaysan. Kuwaas waxaa ka mid ah taleefoonka, macsarada daabacaadda, telefishanka iyo raadiyaha. Haa, xitaa hadda, dadka adduunka oo dhan isticmaali idaacadaha in aad la xiriirto arrimaha dunida. Halkan waxaa ku qoran liis ah idaacadaha news online in aad soco kartaa in la ogaado adduunka guriga.
Tani waxay maamusha BBC-da idaacada British sidoo kale baahiyaa caalamka, bixiya gooldhalinta hogaanka maalintii oo dhan. Waxay bixisaa fiidkii qaybaha kale iyo wixii ka dambeeyey, oo ay ku jiraan qoob ka electronic, hip hop, Oo dhagax weyn ah ama wareysi.
Station ayaa la baahiyay live ka Atlanta, Georgia, US iyo daboolayaa News, hadal iyo bixisaa Warbixin ku dhegeystayaashu oo sidoo kale awoodo habayn ku nool. Waxay leedahay lagu qiyaasay 22921 maqlaa dunida oo dhan.
Idaacadda waxaa la aasaasay sannadkii 1949 ee Port-au-Prince, Haiti. Broadcasting news, macluumaad iyo ka Haiti hadli nool iyo marti hadal show ugu caansan ee Haiti Island, Ranmasse, waxa ay noqotay mid ka mid ah saldhigga raadiyaha wararka warbaahinta ugu caansan oo leh qiyaastii 64972 maqlaa. Dadka tegi kartaa oo hubi idaacada internetka iyo sidoo kale.
Tani waa saldhigga kale radio warbaahinta caanka ah ee New York City iyo New York. Waxaa gudbiya warbixin cusub ee ku saabsan dhacdooyinka isboortiga, hadal iyo arrimaha isboortiga 24/7 iyo haatan waxa uu noqday "Fan The", saldhigga madaxda u ah afar iibiyayaasha isboortiga caan ah; New York Rafaa, New York Red Devils, Brooklyn Nets oo New York Yankees la qiyaastii 28990 dhagaysan dunida oo dhan.
Shakti FM waa idaacad radio online aasaasay Colombo, Sri Lanka gudbinta News, hadal iyo Entertainment luqad Tamil, laakiin weli waxay leedahay ilaa 22146.
MFM Radio waxaa ka Casablance, Morocco ayaa baahiyay live bixinta ugu dambeeyay Hits, News Information iyo in dhagaystayaasha iyo sidoo kale dhaqanka diinta lagu xusay. Arrintan oo uu weheliyo 15664 maqlaa, MFM Radio waa mid ka mid ah idaacadaha ugu caan san.
Station ayaa live ka Port-au-Prince, Haiti baahiyaa oo koriyo News, hadal iyo madadaalada in dhagaystayaasha ay.
Jecel A ee dadka deegaanka ee Magaalada New York, 77 WABC waa US ah bixinta News iyo hadal barnaamijyada xarunta. Its talinaysay groundbreaker ee radio Top 40 iyo horumarka gaar ah sida saldhiga New York ee radio ugu dhageystay ayaa soo bandhigay New York ee liveliness oo loo furi karo online.
10. Radio Yaawaan
Radio Yaawaan waxaa baahiyay live ka Washington DC, Maraykanka iyo kasbadeen ay caan sababtoo ah gudbinta Faarisi News iyo markii ugu horeysay ee taariikhda raadiyaha, barnaamijyada Iran. Waxa uu u adeegi jiray ulajeedada tan iyo markaas ka ah bixinta reer Faaris iyo Iran music online.
Waxaa bixinta waxbarashada Christian, wararka iyo dheeldheel in luqadda Isbaanishka iyo luqado laga heli karaa internetka. Radio Nueva Vida waxaa idaacada ka Camarillo, California, US
Qurbaan News, hadal lagu daray Pop iyo music Jazz online, saldhigga ku salaysan yahay in St John, Antigua iyo Barcuda.
Idaacadda bixisaa Christian Waxbarashada, News iyo dheeldheel iyo waxaa idaacada ka Port-au-Prince, Haiti.
Idaacadda A radio ee Casablanca, Morocco, ee saldhiga ay baahinta live News dunida oo dhan.
Xarunta waa in Manila, Filibiin iyo saldhigga bixisaa News, hadal, Sports caymiska iyo xaaladaha cimilada adduunka oo dhan.
Waa xarun raadiye oo laga sii daayay ka Colombo, Sri Lanka oo daboolaya news iyo music pop luqad Sinhala ee dunida oo dhan.
17. Ku heshiiya FM
Adom FM bixisaa wararka, madadaalada iyo macluumaad iyo waa soo kabsatay ee ugu faraxsan yahay ka songs in articles la yaab leh. Tan iyo intii la aasaasay bishii April 2000 waxa uu ku guuleystay abaalmarino badan ay sabab u tahay shaqo cajiib ah oo taageeraya barnaamijyo badan oo samafal.
Aragga 18. Radio 2000
19. isboortiga xarun-WBZ-FM 98.5, Boston, MA
Sida magacaba ka soo jeedin, rugtan ku salaysan yahay in Chicago, oo lagu yaqaan sida guriga flagship radio ee Chicago cad Sox baseball iyo basketball ragga. Waxaa si fiican u shaqeeyo bixinta sports news, wadahadalo iyo caymiska nool oo ka mid ah dhacdooyinka ciyaaraha ugu danbeeyay oo dhan ku baahsan dunida dacaladeeda. Idaacada Tani waa laga furi karaa barta internetka ee
Idaacada Kampala Tan waxaa bixinaya madadaalo aan kala joogsi lahayn, news, iyo dhacdooyinka isboortiga. Waa dhamaystiran 10 koorso casho oo ma baajiyo in dhunbadeen galisay.
Ilaalinta 22. Radio 630-DZMM-AM 630
DZMM waa saldhigga warbaahinta raadiyaha ee Quezon City, Filibiin, waxaa loo yaqaan saldhig adeegga dadweynaha radio bixinta wararka, wadahadal, madadaalada iyo dhacdooyinka adduunka ugu dambeeyay.
Tani waa radio hit casriga ah (Taariikhdii) ah idaacad ganacsi oo ruqsad in Los Angeles, California. Waxaa loogu dhawaaqaa "FM Kiss" asal ahaan ka mid ah brand KISS-FM, oo waa saldhigga halkaas oo aad dhagaysan kartaa in Ryan Seacrest.
P2 waxaa ka shaqeeya Sveriges Radio (SR) oo ah urur qaran baahinta radio dawladdu maalgaliso ee Sweden. Waxay bixisaa music, inta badan classical music iyo jazz, laakiin sidoo kale waxay leedahay barnaamijyo waxbarasho.
> Resource > Download > Top 25 Online News Radio Stations